TRANO MANAMORONA NY STADIUM BARIKADIMY : Hitohy anio alatsinainy ny fandravana
Mbola mafampana tanteraka ny zava-misy ao amin’ny stadium Barikadimy Toamasina izay misy ny kianja manara-penitra. 2 novembre 2020
Amin’izao ankatoky ny fandraisana ny lalao iraisam-pirenena hifanandrinan’ny ekipm-pirenena Barea sy ny ekipam-pirenen’i Côte d’Ivoire izao, dia miezaka mamita ireo asa izay mbola tokony hovitaina manodidina ny kianja ireo teknisianina misahana ny asa fanamboarana. Anisany tsy maintsy noesorina ireo trano fonenana miorina manamorona ny kianja. Ny fenitra izay mitaky ny tsy tokony hisian’ny trano fonenana 10 ka hatramin’ny 15 m miala ny piste manodidina ny kianja. Trano maro noho izany no voatery tsy maintsy narodana. Nanomboka ny alakamisy 29 oktobra teo izany fandravana trano izany.
Raha ny angom-baovao, dia hitohy anio alatsinainy 2 novambra ny fandravana trano eny amin’ny stadium Barikadimy. Trano manodidina ny 1 000 eo ho eo no mbola miorina manamorona ity kianja manara-penitra ity. Manomboka ho voakasika amin’izao fandrodanana izao ireo trano vato. Ho an’ny eo anivon’ny fitantanana ny kaominina Toamasina, mazava ny azy ireo : “an’ny kaominina io tany io ary tsy mazava sy tsy ara-dalàna ny fomba nipetrahan’ireo olona ireo teo ka tsy maintsy hoesorina mba ho tombontsoa iombonan’ny vahoakan’i Toamasina”.
Etsy ankilany, ny sabotsy 31 oktobra teo ihany dia nanomboka naneho sora-baventy nanao antso amin’ny Filoham-pirenena ny mponina rava trano ary nilaza fa hanomboka haneho tsy fankasitrahana izao fandravana trano izao izy ireo. Ho hita eo arak’izany izay ho tohiny.
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (365) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (97) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (89) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (72) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (59) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (54) 25 janvier 2021